Cable Connectors Ary Lugs Manufacturers sy Suppliers | China Cable Connectors Ary Lugs Factory
Ny malefaka iva tariby connectors (hafa antsoina hoe tariby hasehonao) dia nitombo ho an'ny herinaratra fitsinjarana ny fahefana andalana ny 1 kV. Jera tsipika dia nianatra be isan-karazany ambany connectors malefaka, amin'ny hafa fiangonana sy ny fomba asa. Efa ampiharina ny mety indrindra tariby jointing Accessories mba ho famaranana sy ny fifandraisana amin'ny fifindran'ny andalana
Manana ny manaraka ny tariby isan-karazany sy ny Accessories connectors:
* Seara lohany bolt connectors
* Voaro Pre-tanany
rehetra connectors ny tariby dia mety ho mpitarika ny aluminium sy ny varahina, ny habeny sy ny samy hafa isan-karazany toy ny tafahitsoka rafitra wiring mpitarika, mafy orina, boribory.
Ny malefaka iva lugs tariby dia ampiasaina ho an'ny mpitarika ny tariby elektrika eo amin'ny andalana 1 kV. Jera dia fikarohana isan-karazany ny tariby lugs, ny fanorenana sy ny talen- maro ny asa sy nanjary sahaza indrindra ho fitoriana ny famaranana sy ny fifandraisana ny fampitana tsipika.
Manana ny karazana tariby manaraka ireto Lug:
* Seara lohany bolt tariby lugs
* Pre-Voaro Lug
Cable lugs dia tsara ho an'ny mpitarika ny Aluminum sy varahina, tsy mitovy habe sy ny samy hafa ny rafitra wiring ny mpitarika toy ny tafahitsoka mpitarika, mafy orina sy ny manodidina.
Ny tena mahazatra habe for Seara lohany bolt tariby lugs dia 10 ka hatramin'ny 240 mm2, fa mialoha Voaro tariby lugs dia 10 ka hatramin'ny 95 mm2. Ireo endri-javatra mamela antsika mba hanolotra anao ny vokatra isan-karazany vita indrindra fa lehibe isan-karazany na telegrama.
Izahay, ka mamoaka Seara lohany lugs tariby avy any ambony hery, harafesiny mahatohitra fitaovana aluminium.
Seara lohany bolt Lug CLBV 25-50
Seara lohany bolt Lug CLB 10-25
Seara lohany bolt Lug CLBV 120-300
Seara lohany bolt Lug CLB 25-50
Seara lohany bolt Lug CLB 35-150